Fanolorana mari-panofanana teto Ambatofinandrahana – METFP
Fanolorana mari-panofanana teto Ambatofinandrahana
Manantanteraka ny velirano faha 4 sy faha 6 ny Filoham-pirenena Andry Nirina RAJOELINA, amin’ny alalan’ny Fanofanana arak’Asa miteraka asa mahavelona, hoy ny Ministry Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa – Andriamatoa TSIKEL’IANKINA Ernest -.
Ny fanofanana arak’asa izay hiparitaka manerana ny Nosy, ary tsy eny anivon’ny LTP sy ny CFP ihany, na voafetran’ny salan-taona, fa homena ireo rehetra liana amin’izany, toy ireto tanora miisa 1500 ireto. Tanora niofana tamin’ny sehatrasa momba ny fambolena sy fiompiana, ny informatika, ny fanaingona trano, ny tao-zaitra, ny hay nahandro sy ny fanaovana mofo mamy, ny « ouvrage bois » ary ny « maçonnerie polyvalente ».
Tsy hijanona eo ny fanofanana hoy ny Ministra fa hitohy amin’ny fitrandrahana vato sy ny asa vato ary ny fanaovan-dalana, tsy ho ela dia hanomboka izany, ka hisitraka fanofanana arak’asa ny rehetra. Nahavelom-bolo ny fahitana ny fahazotoan’ireo mpiofana izay 13 taona no kely indrindra ary 70 taona no lehibe indrindra, ity farany dia niofana momba ny informatika.
Tanjon’ny Ministera ny fanomezana fanofanana arak’asa miatraika mivantana amin’ny asa fivelomana, ahafahana mamaly ny filan’ny tsenan’ny asa, misitraka izany ny distrikan’Ambatofinandrahana. Tsy latsa-danja amin’izany ihany koa ny fanofanana arak’asa eny anivon’ny LTP sy ny CFP.
Feno fankasitrahana ny Minisitry ny ETFP kosa ny Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao amin’ny faritra Ambatofinandrahana no sady filohan’ny Antenimieram-pirenena, Ramatoa RAZANAMAHASOA Christine, nohon’ny fijereny manokana ireo tanora ao amin’ity distrika ity. Ny fanomezana fahaiza-manao ireo mponina, izay sitrany sy teliny tokoa ka nitondrany fanohanana tamin’ny fanatanterahana izany. Ireo ezaka fampadrosoana toy ny fanamboaran-dalana, foto-drafitr’asa, sy ny fikirakirana ny vato sy ny fikarakarana tokantrano ihany koa dia nangatahany mba asiam-panofanana manokana. Nankasitraka ny fahavonon’ny Ministera amin’ny fanantanterahana izany izy, izay ezahana ny hanombohana azy tsy ho ela.
Samy naneho ny fahavonony ny roa tonta. Nentina namaranana ny lanonana fanolorana izao mari-panofanana izao ny fitsidihana ny LTP Ambatofinandrahana sy ny dinika natao niaraka tamin’ireo mpitantana ny ivon-toeram-panofanana izay niarahana tamin’ny Talem-paritry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa ao Amoron’i Mania, Andriamatoa ELIHARISAONA Jocelyn Jacques.
« Olo-mahay raha, tsy very mandeha ».